Ụbọchị My Pet » 5 Ihe Celebrities Pụrụ Ịkụziri Anyị Banyere Mmekọrịta
The ozi ọma nke "enen okokporo" George Chukwu agbasa dị ka ngwa ngwa dị ka a griiz ọkụ a kichin; -awụ akpata oyi mba, ma na-enye ndị inyom n'ụwa a ray olileanya.
Ọ na-"enen": Ọmarịcha George na ịlụ di na nwunye!
Nke na-aga iji gosi na nkwa phobia pụrụ n'ezie gwọrọ.
Ọ na-egosikwa n'eziokwu a ole na ole ihe ndị ọzọ anyị ga-amụ ebe a taa ...
N'ihi na ha niile glitz, nkwado nlekiri, ego, na ebube, mgbe ọ na-abịa mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na mating, n'ebe ahụ bụ otu ihe a na-apụghị gọrọ agọ: kpakpando ndị dị nnọọ ka ndị ọzọ nke anyị.
Nke ahụ dị mma. Ndị a folks na anyị na-emekarị ife efe na nwewa-adị ka, ọgụ na mgba ụfọdụ nke otu okwu na ihe ịma aka dị ka anyị "nanị mmadụ."
Ihe dị ka obi erughị ala, nwa mama ejije, na-atụ egwu, aghara, na ekwesịghị ntụkwasị obi– ole na ole aha. -Egosi na ịhụnanya bụ kacha equalizer.
Nnukwu dị iche ebe a?
Onwe onye n'ihe omume nke siri na-nyochara, katọrọ ma na-egwuri si na a mba ogbo, n'ihi na ọha na-ekiri.
Ya mere, ebe a bụ ole na ole ihe ndị anyị nwere ike ịmụta n'aka ha nnọọ anya "na-arụ ọrụ" na romances.
Get gị pencils njikere.
1. Ịkpa n'èzí bụghị mgbe niile banyere "nwanyị nke ọzọ" ịbụ prettier ma ọ bụ na-eweta ihe na tebụl. O di nwute na, ụmụ okorobịa na-adịghị mgbe "ahia elu."
Tụlee mara mma, nkà, ojuju na-eduga ladies na Hollywood na ọha na ọnụ ọgụgụ ndị e kọrọ ghọgburu on: Halle Berry, Sandra oke-ehi, Jennifer Anniston, Maria Shriver. Gịnị ka anyị pụrụ ịmụta ebe a? Ịkpa n'èzí na-bụ ihe banyere onye nke ọzọ okwu karịa mmadụ ịbụ ghọgburu on. Atụla ilu, -aka mma.
2. Ego nwere ike ọ bụghị mgbe nile ịzụta obi ụtọ. Statistics na-egosi na otu n'ime ndị na-eduga na-akpata ịgba alụkwaghịm na America bụ ego. Ma, na Hollywood, ebe ama folks nwere ihe ego karịa ọtụtụ n'ime anyị ga-ebi na-ahụ na a ndụ, e nwere ka "nsogbu na Paradaịs." Anyị na-agụ kwa izu akụkọ banyere ihe, ike siiri, na-eri ahụ omume, iwe management, na ekwesịghị ntụkwasị obi. Ọ na-aga na-egosi na uba ọ bụghị mgbe nile na-emetụta obi ụtọ.
3. Age dị iche adịghị ga-abụ a "ndibiat emebi."Lee anya na Jennifer Lopez na ya choreographer cutie, Casper. E nwere ihe banyere afọ 20 afọ mgbasa maka di na nwunye, ma ha na-egosi na-na-tinyere fabulously. N'ezie, ọ bụ obere ịhụ JLO enweghị a ọnụ ọchị ya ihu ụbọchị ndị a. Ị na-aga girl!
4. Ekwenyere bachelors nwere ike a mgbanwe nke obi.
Mgbe ụfọdụ ọ na-ewe ezi nwaanyị. N'oge ndị ọzọ, oge pụrụ ịbụ nnukwu akpata. Asịkwala na ọ gaghị eme.
5. "Ọ bụrụ na na mbụ ị na-adịghị ihe ịga nke ọma, nwaa ọzọ. " Ọ bụ ezie na ole na ole n'ime anyị ga-chọrọ na-enweta adiana nke mmekọ na nkenke encounters anyị na àmà na ụfọdụ kpakpando, e nwere ihe na-kwuru n'ihi na ha obi resilience na ha kweere na ha nwere ike ide a "obi ụtọ ogwugwu" ha onye ịhụnanya akụkọ, ọ nọgidere na-emeghe n'anya. Ọmụmaatụ, siri dị ka Steve Harvey, Jennifer Lopez, Elizabeth Burton, na Demi Moore na-eje ije ala wara wara karịa a oge ma ọ bụ abụọ. Ha chere na nkà ihe ọmụma? N'ikpeazụ, ọ na-agbụ na-arapara.
E nwere ya.
Stars ẹnyene anyị. Mgbe ụfọdụ, ha nwere ike ịkụziri anyị. Ise a ihe na-eje ozi kpọmkwem n'ihi nzube a. Anyị niile kwesịrị ịṅa ntị na ha.